Factory vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra, mpamatsy - mpanamboatra hoditra vita amin'ny hoditra China
Ny PVC, fohy ny Polyvinylchlorid, dia misy sosona maro kokoa ao ambanin'ilay firakofana. Ny akora fototra ao aminy dia ny polyvinyl chloride, ary ny akora hafa dia ampiana hanatsara ny fanoherana ny hafanana, ny hamafiny, ny fikojakany. Ny PVC koa dia manana tanjaka avo sy fitoniana tena tsara, ary tsy mora mirehitra, afaka manohitra ny fiovan'ny toetrandro ary mitondra lozika sy trangan-javatra hafa. Fitaovana tena tsara izy io, noho ny fiarovana avo lenta azy, noho izany dia hita eny rehetra eny amin'ny fiainana izy amin'ny fiainana andavanandro, vokatra vita amin'ny hoditra maro karazana no hita eny rehetra eny, toy ny haingon-trano anatiny, lamba sofa, atin'ny fiara, akanjo, kiraro sy kitapo sns. Ny vokatra vita amin'ny hoditra izay tena mitovy dia vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra
0.25mm-3mm vita amin'ny hoditra vita amin'ny rivotra vita amin'ny rivotra ho an'ny fanovana anatiny
Volo vita amin'ny vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra vita amin'ny artifisialy PVC Volo mifaninana
Raha ampitahaina amin'ny hoditra hafa, ny hoditra PVC dia mora kokoa amin'ny plastika ary tsara kokoa ny manadio, matetika amin'ny lamba famaohana lena na lamba famaohana lena. Ny ankabeazan'ireo hoditra vita amin'ny PVC vita amin'ny Bensen dia ao anaty tahiry, mifandraisa aminay azafady raha mila antsipiriany na santionany misimisy ianao.
Taratasy vita amin'ny kodiarana vita amin'ny rivotra vita amin'ny fiara BMW
Fitaovana malefaka vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra vita amin'ny solika ho an'ny gorodona fiara amin'ny Roll
Mpanamboatra sinoa vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra vita amin'ny solitany any Sina
0.7mm hatevin'ny volo vita amin'ny volo PVC ho an'ny fitaovana fonosana fiara
Volo vita amin'ny artifisialy PVC avo lenta ho an'ny haingon-trano anatiny amin'ny fiara
Fitaovana fiara manarona fitaovana vita amin'ny hoditra vita amin'ny volon-koditra vita amin'ny artifisialy miaraka amin'ny vidiny mifaninana
54/55 mirefy vita amin'ny hoditra PVC synthetic ho an'ny seza fiara
Custom Faux Synthetic PVC Auto hoditra ho an'ny seza fiara